တရာစွဲချင်ရင် ၁၀ သိန်းတင်ရမယ် … deposit 10 lakh to sue | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » တရာစွဲချင်ရင် ၁၀ သိန်းတင်ရမယ် … deposit 10 lakh to sue
တရာစွဲချင်ရင် ၁၀ သိန်းတင်ရမယ် … deposit 10 lakh to sue
Posted by fatty on Nov 22, 2010 in News | 11 comments
10 lakh to sue
ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ မသမာမှုများကို အချို့ အဖွဲ့အစည်းများ ဟာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာနဲ့
အသေအချာ မှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရားစွဲလိုရင် ၁၀သိန်း ဒီပိုစစ်
တင်ရမယ်၊ ပြီးတော့တရားမမှုဖြစ်မှာမို့ အမှုကနှစ်နဲ့ချည်ကြာပါလိမ့်မယ်။ အမှုမပြီးမခြင်း ငွေ
တွေဆက်ကုန်နေအုံးမှာဘဲလို့သိရပါတယ်။ တကယ်တန်းပြောရရင်တော့ အမှန်တရားကိုသိခွင့်မရအောင် အသေအချာ အစီအစဉ်လုပ်ပြီး ပိတ်ပင်ထားတာနဲ့များတူနေသလားလို့။ မတရားအမှုဆင်ပြီးတိုင်ရင် တိုင်တဲ့သူကိုပြန်ပြီးတရားစွဲလို့ရတယ်ဆိုတော်သေးတယ်။ အခုထိတော့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှ
ဟုတ်ကဲ့ .. နိုင် နိုင် ရှုံး ရှုံး အနည်းဆုံး တစ်ဆယ်သိန်း ကုန်ဦးမှာ ..
ရှုံးမယ် ဆိုရင် ထောင်ကျဦးမှာ ဆိုတော့ .. ဘယ်သူပြိုင်လို့ စွဲပါတော့နိုင် .. လို့ မှတ်ချက်ချရင် လွန်မှာလား ..
အစကတည်းက ဒီချောတိုင်ကို မတက်ပါနဲ့လို့ ဝိုင်းအော်နေတဲ့ကြားက တက်ချင်ဦးဟ။
အခုမှတော့ ဘယ်သူမှလည်း မကယ်နိုင်တော့ပါဘူး။
အမတ်ဖြစ်မလားလို့ ကြိုးစားလိုက်တာ အငတ်ဖြစ်ကိန်းကြီးပါလား။
x ကျင့် x ကြံ ကြံမှတော့ ဘယ်သူယှဉ်လို့ရမှာလဲ ။
ရှုံးသွားရင်တော့ ဂျေး ……….။
တကယ်လို့များ နှစ်နဲ့ချီစောင့်ပြီး နိုင်သွားခဲ့ရင်တောင် အဲဒီအချိန်ကိုရောက်ရင်
အင်း… ရှုံးသွားရင်တော့ ……….
ငါပြောတယ်မှတ်လား ဒါပဲလေ ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ ဒါအမှန်ပဲလေ ~~~~:D
UN က ချမှတ်ထားတဲ. Rule တွေကိုတောင် ဟာကွက်၇အောင်ရှာနိုင်တာပဲ
ဘယ်လိုလိမ်ညာ၇မလဲ (ပြည်သူတွေနဲ.တကမ္ဘာလုံး) ကို ကြိုတင်စီစဉ်ပြီးသားပါ
Plan A to ……….
ကိုယ့်ကိုမတရားလုပ်တာတောင် ပြန်မပြောရဲတဲ့ အမတ်လောင်းတွေ….
မှန်တယ်ဆိုရင် ၁၀ သိန်းဆုံးယုံမက…
ထောင်ကျမယ်ဆိုရင်တောင် ရှေ့ကနေရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်မရှိသင့်ပေဘူးလား ခင်ဗျာ..။
နအဖရဲ့၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဲပေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မမှန်ကန်မှုတွေကို တိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီး နအဖလက်အောက်ခံ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို တိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီး စာပို့ ပါသတဲ့။
နအဖ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရဲ့ ပါတီတွေကို အကြောင်းကြားစာဟာ အချက်အလက်မှန်ကိုတမင်သက်သက် ထိန်ချန် ဖုံးကွယ်ထားတဲ့၊ ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှု မရှိတဲ့စာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ဥပဒေအရ ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမှု မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ (အခန်း ၁၃) နဲ့တရားမဲ့ ပြုကျင့်မှုများ (အခန်း ၁၄) ဆိုပြီး ရှိတဲ့ အနက်၊ ရဲအရေးယူပိုင်ခွ င့် ရှိတဲ့၊ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ ကနေ ၁၅ ရက်အတွင်း ရဲစခန်းကို တိုင်ရမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများကို တိုင်ကြားနိုင်တယ် ဆိုတာကို ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။
တမင်ငွေ ၁၀ သိန်းနဲ့ ခြောက်ပြီး လမ်းလွဲအောင် လုပ်တယ်လို့ယူဆစရာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အခန်း (၁၃) ပုဒ်မ ၅၇ ကနေ ပုဒ်မ ၆၃ အထိ ပြဌာန်းထားတဲ့ ပြစ်မှုတွေဟာ အခု ပါတီတွေ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ ပြောနေတဲ့ ကိစ္စ အများစု အကြုံးဝင်ပါတယ်။ သက်သေ
(သို့ ) အထောက်အထားရှိရင် ရဲကိုတိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှုဖွင့်တာကို လက်ခံပြီး ခိုင်လုံ မခိုင်လုံ စုံစမ်း၊ အမှုကို တည်ဆောက်ပြီး တရားရုံး တင်ရမှာက ရဲ ရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲမှာ အကြမ်းဖက်တာ၊ လိမ်တာ၊ ခြိမ်းခြောက်တာ၊ မလျော်သြဇာသုံးတာ (မင်းတို့ဝန်ထမ်းတွေ ကြံ့ ဖွတ်ကိုဘဲ ထဲ့ရမယ် လို့အထက်ပြောတယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့ ) မဲ အပိုတွေလုပ်ထားတာ၊ ဗလီဆောက်ခွင့် ပေးပြီး ပါတီဝင် မဲထဲ့ခိုင်းတာ၊ စာရင်းတွေပြင်ရေးတာ၊ ငွေပေးပြီး မတရားလုပ်ခိုင်းတာ၊ ဘေးကနေ ခြင်္သေ့ကို အမှန်ခြစ်ခိုင်းတာ၊ ကိုယ်စားမဲပေးတာ စသည်ဖြင့် အားလုံးဟာ ရဲမှုတွေ ချည်းပါဘဲ။
တခြားကိစ္စတွေမှာ ကျူးလွန်တဲ့ အလားတူပြစ်မှုတွေနဲ့ အတူတူပါဘဲ။ ဒါကို ၁၅ ရက်ကန့် သတ်ထားတာကိုက ဥပဒေနဲ့ မညီပါ။ ရှေ့ နေတွေ ဥပဒေနားလည်တဲ့ သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး အမြန်ဆုံး ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်သင့်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၇၊ ၆၈ နဲ့နည်းဥပဒေ ၈၇ တို့ ဟာ အရွေးခံရတဲ့ သူဟာ တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတွေကြောင့် အရွေးခံရတာ ဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့် အဲဒီ မဲဆန္ဒနယ်မှာ ကျင်းပတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားမျှတမှု မရှိဘူး ဆိုတာကို ကန့် ကွက်ဘို့ ပါ။ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ အခန်း (၁၄) မှာ ပြဌာန်းထားတဲ့ တရားမဲ့ပြုကျင့် မှုများဆိုတာနဲ့ဘဲဆိုင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေအတွက် ကန့် ကွက်မှသာ ငွေ ၁၀ သိန်းသွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အကြောင်းကြားစာမှာ ခြိမ်းခြောက်ထားတဲ့ ပုဒ်မ ၆၄ ဆိုတာကလဲ လိမ်လည်စွပ်စွဲ တိုင်တန်းမှသာ ငြိစွန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒိတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ကိုယ်၌က တရားဥပဒေနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အပြင် ဒီအကြောင်းကြားစာသည်ပင်လျှင် ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ထားတယ်လို့မြင်မိကြောင်းပါ ခင်ဗျား။
အဲဒီ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရဲ့ ပါတီတွေကို အကြောင်းကြားစာဟာ အချက်အလက်မှန်ကို တမင်သက်သက် ထိန်ချန် ဖုံးကွယ်ထားတဲ့၊ ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှု မရှိတဲ့စာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ ဥပဒေအရ ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမှု မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ (အခန်း ၁၃) နဲ့တရားမဲ့ ပြုကျင့်မှုများ (အခန်း ၁၄) ဆိုပြီး ရှိတဲ့ အနက်၊ ရဲအရေးယူပိုင်ခွ င့် ရှိတဲ့၊ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ ကနေ ၁၅ ရက်အတွင်း ရဲစခန်းကို တိုင်ရမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများကို တိုင်ကြားနိုင်တယ် ဆိုတာကို ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။
(သို့ ) အထောက်အထားရှိ၇င်ရဲကိုတိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှုဖွင့်တာကို လက်ခံပြီး ခိုင်လုံ မခိုင်လုံစုံစမ်း၊ အမှုကိုတည်ဆောက် ပြီး တရားရုံး တင်ရမှာက ရဲ ရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ် ။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အကြမ်းဖက်တာ၊ လိမ်တာ၊ ခြိမ်းခြောက်တာ၊ မလျော်သြဇာသုံးတာ(မင်းတို့ဝန်ထမ်းတွေ ကြံ့ ဖွတ်ကိုဘဲ ထဲ့ရမယ် လို့အထက်ကပြောတယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့ ) မဲ အပိုတွေလုပ်ထားတာ၊ ဗလီဆောက်ခွင့် ပေးပြီး ပါတီဝင် မဲထဲ့ခိုင်းတာ၊ စာရင်းတွေပြင်ရေးတာ၊ ငွေပေးပြီး မတရားလုပ်ခိုင်းတာ၊ ဘေးကနေ ခြသေ့င်္ကို အမှန်ခြစ်ခိုင်းတာ၊ ကိုယ်စားမဲပေးတာ စသည်ဖြင့် အားလုံးဟာ ရဲမှုတွေ ချည်းပါဘဲ။
တခြားကိစ္စတွေမှာ ကျူးလွန်တဲ့ အလားတူပြစ်မှုတွေနဲ့ အတူတူပါဘဲ။ ဒါကို ၁၅ ရက်ကန့် သတ်ထားတာကိုက ဥပဒေနဲ့ မညီပါ။ ရှေ့ နေတွေ ဥပဒေနားလည်တဲ့ သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး အမြန်ဆုံး ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်သင့်ပါ တယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၇၊ ၆၈ နဲ့နည်းဥပဒေ ၈၇ တို့ ဟာ အရွေးခံရတဲ့ သူဟာ တရားမဲ့ပြုကျင့် မှု တွေကြောင့် အရွေးခံရတာ ဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့် အဲဒီ မဲဆန္ဒနယ်မှာ ကျင်းပတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားမျှတမှု မရှိဘူး ဆိုတာကို ကန့် ကွက်ဘို့ ပါ။
ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ အခန်း (၁၄) မှာ ပြဌာန်းထားတဲ့ တရားမဲ့ပြုကျင့် မှုများ ဆိုတာနဲ့ဘဲဆိုင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေအတွက် ကန့် ကွက်မှသာ ငွေ ၁၀ သိန်းသွင်းရမြှာ ဖစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အကြောင်းကြားစာမှာ ခြိမ်းခြောက်ထား တဲ့ ပုဒ်မ ၆၄ ဆိုတာကလဲ လိမ်လည်စွပ်စွဲ တိုင်တန်းမှသာ ငြိစွန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ကိုယ်၌က တရားဥပဒေနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အပြင် ဒီအကြောင်းကြားစာသည်ပင်လျှင် ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ထားတယ်လို့မြင်မိကြောင်းပါ ခင်ဗျား။http://www.niknayman-niknayman.co.cc/2010/11/blog-post_1958.html
အ မေ စု စ ကား နာ မ ထောင် တဲ. ဟာ တွေ ခံ ပေါ. ….
ဦးနှောက်ကိတ်စပါပဲ။ စည်းလုံးကြဆိုလို့ စည်းလုံးတဲ့အကြောင်း ပြည်သူတွေက ပြသပြီးပါပြီ။ ဘယ်လမ်းကိုဘယ်နည်းနဲ့ ဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတာကို မသိကြတာပါ။ ဟိုးအရင်က ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုဟာ သူသာလျှင်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ် ကြောင်း ကြေငြာသွားပါတယ်။ အဲဒါကိုဆက်လုပ်လို့ ရမလားမသိဘူး။ လူတွေ ကို လမ်းလျှောက်စေချင်ရင် လျှောက်ရမယ့်လမ်းကိုလည်း ပြပေးရမယ်လေ။ လမ်းမသိဘဲ ဘယ်လိုလျှောက် မလဲ။ အန်တီစုအိမ်ရှေ့မှာ သွားရပ်ရုံနဲ့ ဘာမှဖြစ်လာမှာမှ မဟုတ်တာ။ ဒီလိုပြောလို့ အန်တီစုကိုမလိုလားသူလို့ မထင်ပါနဲ့ ။ အန်တီစု ကို သိပ်ချစ်တာ မပြောပြတတ်လောက်အောင်ပါပဲ။ ဘာမှမတတ်နိုင်လို့သာ။ တစ်ခုခုလုပ်ပေးနိုင်တာများရှိရင် အကြံပေးကြပါဦး။